OROMOO BILISOOMSUUF murtiin murtaayee, murtii sirrii abdii Saba kanatti horuufii nama gammachiisuudha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOROMOO BILISOOMSUUF murtiin murtaayee, murtii sirrii abdii Saba kanatti horuufii nama gammachiisuudha.
#OROMOO_BILISOOMSUUF murtiin murtaayee, murtii sirrii abdii Saba kanatti horuufii nama gammachiisuudha.
#Obboo_jawaar_muhammad. Paartii KFOtti makamuun qabsoo dhallii oromoo jaarraa tokkoof walakaa ol dhiigaaf lubbuu ofii Ittii kaffalaa ture xumura Ittii godhuuf carraa argame hundaan qaroomanii FILMAATAAN socho’amee, INJIFANNOON golaabuuf , yaada HAYYOOTA, QABSAAHOOTA fii HOOGGANTOOTA keenyaan murtii sirrii murteefameedha.
Jawaar maaf ABO yookin PBO irraa KFO filatee? Jechuun shufuroon hedduun yaada faallaa garagaraa uumuun Wal jibbaa uumuuf wacaa jiru.
DHAABBILEEN OROMOO SADEEN HOOGGANSA gaaddisa oromoo jalatti tokkuumman waliif galanii , Maqaa garagaraan socho’aa jiraataniis tokkuummaan warra walitti eda’amanii akka paartii tokkootti waliin mari’ataa qabsoo kana geggeessaa jiraniidha.
#Jawaar_mohaammad murtee hooggantoota dhaabbilee oromootiin KFO akka seenuu gammachuun Kan murteefameedha.
Sababbiin isaas akkuma beekkamu biyyattii San keessattii dhaabnii jabaaf warra biyya bulchaa jiruuf dhibee guddaa ta’ee gufuufii shirri guddaan Ittii dalagamuu ABO dha.
Kanaaf ABO cabsuuf wantii isaan hin yaallee, gufuun ABO balleessuuf hin bocamnee, hin jiru.
Ammas halkaniif guyyaa biyya bulchuu dhiisanii ABO sakaaluuf halkaniif guyyaa irratti hojjataa Kan jiraniidha.
Akkasuma jawaar mohaamadiiniis kuffisuuf , sakaaluuf , kijibsiisuu biras darbee hanga ajjeechaatti nama Ittii tarkaanfataa turaniifii ammas halkaniif guyyaa dhibee Ittii ta’ee , Shira hedduu irrattii xaxuuf warra ciisa dhabaa jiraniidha.
Warra gamaaf gamanaan dhibee itti ta’aa jiru ABO f JAWAAR waliitti yoo eda’ame, daranuu gufuun hedduumaattee, waan qaban hundaan yoo dadhabaniis adunyaa biroos qarqaarsifatanii dhaabuma kana karaattii hambisuuf Kan dur caalaa jabaatanii sochiin yaaddamme otuu hin golaabamin karaattuu hafuu mala waan ta’eef JAWAAR KFO waliin cimee akka hojjattu murtee gammachuun murtaayeedha.
Gadaan gadaa INJIFANNOO keenya golaabuuf jaalalaaf tookkummaan hojjanuudha.
Gadaa INJIFANNOO OROMOO adunyaatti labsamu irra geenye jirra.
Guyyaan FILANNOO guyyaa tokkoofille ta’u hin dheeratu,
korojoon QEERROOFI QARREEN tikfama.